ငှတေဈသိနျး သုံးလိုကျရငျ (၂) သိနျးတနျ ကြောကျအောငျသူ… – Shwe Naung
ငှတေဈသိနျး သုံးလိုကျရငျ (၂) သိနျးတနျ ကြောကျအောငျသူ…
ရနျကုနျ မွို့ Strand ဟိုတယျမှာ အနေ မြားတဲ့သူ…‌ငှကေို‌လေ လိုသုံးနိုငျ‌ပမေဲ့လ ညျးမေ ပျြာရှငျခဲ့တဲ့ သူ..သူဌေွး ကီးမိုးကု တျဦးမွမောငျ
စာရေးဆ ရာသျောတာဆှကေ သူငယျခငျြွး ဖဈသူ မိုးကုတျမွို့သား ကိုမွမောငျအား ငှကေိုလလေို သုံးသူ ဟူ၍ တငျစားချေါဝျေါခဲ့သညျ။ မိုးကုတျမွို့နေ ဦးကွာညှ နျ့ဒျေါသနျး တို့ ဇနီးမောငျနှံသ ညျ မောငျမွမောငျလေး မှေးဖှားပွီး နောကျပိုငျး သိသာစှာ စီးပှားတကျေ လတော့သ ညျ။ကြောကျကွီးကြောကျကောငျးမြား အောငျခဲ့ကွ၏။
ကိုမွမောငျက တဈသိ နျးသုံးလြှငျ သူ၏ မိဘမြား ကကျြေတှငျးတှငျ နှဈသိနျးတနျကြောကျ အောငျလေ၏။ ကိုမွမောငျ တဈနတေ့ဈသောငျးသာ သုံးစှဲပါက နှဈသောငျးတ နျကြောကျသာ အောငျ၏။ ကိုမွမောငျက ရနျကုနျတှငျနထေိုငျပွီး ငှကေိုလလေို သုံးစှဲလေ၏ ။
စာရေးဆရာေ သျာတာဆှေ စသော သူငယျခငျြးမြားနှငျ့ အရကျသောကျ၏ ကွကျတိုကျ၏ ဟျောတယျ တကျကွ၏။ သုံးကွ၏ ဖွုနျးကွ၏။ ရနျကုနျမွို့တှငျ ခွံဧကပေါငျးမြားစှာ ဝယျထား၏။
ဖကျလိပျစိ နျ(ရှကေို ဖကျကဲ့သို့ ကတော့ထိုး၍ ထိပျတှငျ တဈပှငျ့စိနျ တပျကာ နားဋောငျးအဖွဈ ဝတျဆငျခဲ့ခွငျးl နဂါးဒျေါဥ ကဲ့သို့ ရှေးက သူဋ်ဌေးမကွီးမြားသာ ဝတျဆငျခဲ့ကွသညျ) မြားစှာရှိလေ၏။
အရညျအသှေးကောငျးသော ပတ်တမွားမြား ဆိုလြှငျကား ပွောဘှယျ မရှိတော့ပါ ။ စာရေးဆရာသျောတာဆှကေ ကိုမွမောငျ ခငျဗြား ဘယျလောကျခမျြးသာလဲဟု မေးရာ “မသိဘူးဗြ”ဟူ၍ အဖွပေေးခဲ့၏။ မိုးကုတျကနေ မန်တလေးအထိ တဈရာတ နျတှကေို ကားလမျးအပွညျ့ ခငျးနိုငျတယျ ဟူ၍ ပွောပွ၏။ ဦးမွမောငျ မိုးကုတျမှမန်တလေးသို့ ကားဖွငျ့ဆငျးလာရာ လမျးတှငျ ဂဈြကား တဈစီးက သူ၏ကားကို ကြျောတကျသှား၏။
ထိုအခါ ကိုမွမောငျက ဒရိုငျဘာအား အဆိုပါဂဈြကားကို အမီလိုကျခိုငျး၏။ မီလာသောအခါ နောကျကနေ ဝငျတိုကျခိုငျးလိုကျ၏။ ဂဈြကားပျေါက လူမြား မကျြကလူးဆနျပြာဖွငျ့ ဆငျးလာသောအခါ
” ခငျဗြားတို့ကား ဝယျစဉျက ဘယျလောကျပေးရသလဲ? ”
“၅၀၀၀ ကပျြ ပေးရတယျ”
“ရော့ ၅၀၀၀ ” ဟူ၍ အလြျောပေးလိုကျ၏။
ငှကေို လလေိုသုံးသူ ( သို့မဟုတျ ) ဘဝ၏ အလုပျလကျမဲ့
ရှမျးစျောဘှားမြား တနျခိုးအာဏာ ကွီးထှားစဉျကာလ တခြိနျသောအခါ၌ မိုးမိတျမွို့နယျ သဈတောကွိုးဝငျးထဲတှငျ မိုးမိတျစျောဘှား၏ ဆငျတဈကောငျကိ လူတဈေ ယာကျက သနေတျနှငျ့ ပဈသတျလိုကျလေ၏။ မကွာမီ ခေါငျးပေါငျးနီနှငျ့ ရှမျးပုလိပျမြား ရောကျလာကာ ဆငျသတျသူကို ဖမျးဆီးမညျပွုသျော ထိုလူက
” ဟေ့ ဒါ တောဆငျ မဟုတျလား ၊ ဘယျသူ့ဆငျ မို့လဲကှ ”
” တောဆငျ မဟုတျပါဘူး ၊စျောဘှားရဲ့ စီးတျောဆငျပါ ခငျဗြ ”
” မငျးတို့စျောဘှားနာမညျက ဘယျသူလဲ ”
” စောခှနျခြို ”
” ဟေ့ ငါ့နာမညျက မိုးကုတျမွမောငျ စောခှနျခြို ကို ပွောလိုကျ ၊ ငါက သူကိုယျတိုငျ ဝေါနဲ့လာချေါမှ လိုကျမယျ ”
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာစကားတှငျ `ဆငျသတျအရပျဝတေယျ ဟု ဆိုကွသညျ ။ သူတို့ကား ဆငျသတျ၍ ညီအဈကိုခငျြး ကြီစယျကွခွငျး ဖွဈသညျ ။ အကွောငျးမှာ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေ ကိုမွမောငျနှငျ့ စောခှနျခြို သညျ မအညေီအဈမအရငျး ညီအဈကိုတဈဝမျးကှဲ ဖွဈသညျ ။ စောခှနျခြိုက တကယျပဲ ကိုမွမောငျအား ဝေါနှငျ့လာကွို ရသညျတဲ့ ။
” ဆရာ့သူငယျခငျြးက အတျောဆိုးတဲ့လူဗြာ ” ဟု စောခှနျခြို က ကြှနျတေျာ့ကို ပွောပါသညျ ။
ဟုတျကဲ့ ။ ကိုမွမောငျကား တျောတျောဆိုးတဲ့ လူပါ ။ ဖဆပလ အစိုးရလကျထကျကလညျး ဝနျကွီးတှေ မာစီဒီးကား စီးရသညျ၌ ဝနျကွီး သခငျသာခငျသညျ မိုးကုတျသားဖွဈ၍ ထိုမာစီဒီးကားနှငျ့ မိုးကုတျသို့ ရောကျသှားသညျ ရှိသျော ယငျးအခြိနျ၌ ကိုမွမောငျ ကားလညျး မာစီဒီး ဖွဈနသေောကွောငျ့
” ဟာ သခငျသာခငျတောငျ ဒီကားမြိုးစီးတယျဆိုရငျ ငါမစီးတော့ဘူး ”ဟု ဆို၍ သူ့ကားသူ ခြောကျထဲ မောငျးခပြဈလိုကျသညျ ဟူသတညျး ။ ကဲ … မယုံလြှငျ ပုံပွငျသာ မှတျကွပရေော ။အမှနျတော့ ကိုမွမောငျသညျ တကယျပငျ ရှိခဲ့ပါ၏ ။ 1968 ,ဇန်နဝါရီ 18 ရကျ နကေ့မှ အသကျ ၄၁ နှဈနှငျ့ ဦးနှောကျအာရုံကွော ပွတျ၍ သဆေုံးသှားပါသညျ။သူ့အကွောငျးကို ကြှနျတျောသညျ
”ငှကေို လလေိုသုံးသူ ” ဟူသော ဝတ်ထုတို ရေးခဲ့ပါ၏။ ဝမျးတှငျးပါ သူဋ်ဌေး စငျစဈ ကိုမွမောငျကို ဝမျးတှငျးပါသူဋ်ဌေးဟု ချေါရမညျ ဖွဈ၏။ သူ့မိဘမြားသညျ မိုးကုတျမွို့တှငျ ကံအကောငျးဆုံး ၊ ကြောကျ အအောငျဆုံး ဖွဈ၏။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွီးမဖွဈမီက သူ့အဖသေညျ ပွငျသဈပွညျပဲရဈမွို့တှငျ ပတ်တမွားဆိုငျ သှားဖှငျ့ထား၍ မွနျမာပွညျမှ ကြောကျမကျြ ရတနာမြားကို ကမ်ဘာ့ဈေး ထိပျတနျးမှ ရောငျးခဲ့သူ ဖွဈသညျ။
ကိုမွမောငျသညျ ပဲရဈမွို့မှာ သှားနေ၍ ပဲရဈနှငျ့လနျဒနျကို အိမျဦးကွမျးပွငျ ကူးကာ အမရေိကနျ ၊ အင်ျဂလနျ မီလြှံနာမြား ကဲ့သို့ သုံးဖွုနျးခဲ့သူ ဖွဈသညျ ။ နောကျ သူ့ဖခငျကှယျလှနျ၍ ပဲရဈမှာ ပတ်တမွားဆိုငျ မရှိတော့သျောလညျး ကိုမွမောငျအဖို့ မွနျမာပွညျမှာ သူ့တသကျ ဘယျလောကျသုံးသုံး၊ ဖွုနျးဖွုနျး မကုနျနှိုငျ။
သူ့မိခငျကလညျး တဈဦးတညျးသော သားကွီးအား သုံးပါစေ၊ဖွုနျးပါစေ။ မသုံးမှာ၊မဖွုနျးမှာကိုသာ ပူရသညျ။ မွမောငျ တဈသောငျးဖွု နျးလြှငျ၊ တဈသိနျးဝငျငှရေသညျဟု ပွောစမှတျ ပွုသတဲ့။ ကဲသညျလူမြိုး ကမ်ဘာတှငျ မရှားပါလော ။
သို့သျော ငှခေမျြးသာရုံနှငျ့ ဘဝမှာ ပွညျ့စုံပါ သလော ? ? ?
တနသေ့၌ ကိုမွမောငျသညျ အရကျအမူးလှနျ၍ ကြှနျတော့အိမျတှငျ လဲပွီး တရေးအနိုးမှာ ထပျသောကျရငျး ဘာတှမြေား တှေးမိ၍ ဝမျးနညျးလသေညျ မသိ၊ မကျြရညျတှစေို့လြှကျ ကြှနျတော့အား ပွောဖူးပါသညျ။
” ကိုဆှေ …ကြှနျတေျာ့မှာ ငှတှေသေိပျခမျြးသာတော့ သဘောရှိ သုံးဖွုနျးပွီး စိတျထငျသလိုနရေ၊ စားရတာ ပြျောတယျ၊ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ကနြေပျနတေယျမြား ထငျသလား။
မထငျနဲ့ ကိုဆှေ၊ ကြှနျတေျာ့ဘဝနဲ့ ခငျဗြားဘဝ လဲရရငျ လဲလိုကျခငျြတယျ သိရဲ့လား ” ထနျးရညျမူး၍ ကြှဲခိုးပျေါသညျ။ သူ့အသညျးနှလုံးထဲက ပွောသောစကား ဖွဈသညျ။ ယငျးကို ကြှနျတျော အလေးအနကျ စဉျးစားသညျ။ ရနျကုနျမွို့ကွီးသညျ လောကနိဗ်ဗာနျဖွဈသညျ ဆိုသောခတျေ၊ ငှရှေိ လိုတရသော ခတျေကပငျ သူနှငျ့ကြှနျတျော ရငျးနှီးစှာ ပေါငျးသငျးခဲ့ပါသညျ ။
ကိုမွမောငျသညျ သူ၏ဇာတိ မိုးကုတျမွို့နှငျ့ သူ့မိခငျနသေော မန်တလေးမွို့မှာထကျ မွနျမာပွညျတှငျ အကွီးဆုံး၊ သုံးလို့ဖွုနျးလို့ အကောငျးဆုံးသော ရနျကုနျမွို့ကွီးမှာ အနမြေားပါသညျ။ စထရငျးဟိုတယျမှာ လပေးနှငျ့ တညျးပါသညျ။
ဟိုတယျအောကျမှာ သူ့ကားကွီးတဈစီး ထားပါသညျ။ သူလိုသမြှ ခိုငျးရနျ လကျစှဲတျော တဈယောကျနှဈယောကျ၊ လခပေး၍ ထားပါသညျ။ နံနကျမိုးသောကျလြှငျ သူတို့သညျ သူ့ဆီသို့ ရောကျလာရသညျ။ ကိုမွမောငျသညျ နံကျ ၈ နာရီလောကျမှာ အိပျယာက ထတတျပါသညျ။
ဟိုတယျက ပေးသော ဘရိတျဖတျဈချေါ ကျောဖီတဈအိုး ၊ပေါငျမုနျ့ထောပတျသုပျ နှဈခပျြ၊ဝကျမလှတျငှကျပြောသီး ၂ လုံးကို စားလိုက စားပါသညျ။ ရခြေိုးအဝတျလဲပါသညျ။ရောကျ လာ မညျ့မိတျဆှမြေားကို မြှျောပါသညျ ။
ဘာလုပျရအောငျနညျး။ ဟိုတယျကွီးတဈခုခုမှာ နံကျစာ စားရအောငျပါ ။ ဟိုတယျမှာစားတာ လူမြားပါမှ ဟငျးလြှာမြားမြားနှငျ့ စားလို့ မွိုငျသညျ ၊မွိနျသညျ မဟုတျပါလား ။ ၁၁ နာရီလောကျထိအောငျ စောငျ့သညျ ရောကျသငျ့သလောကျ ရောကျမလာပါက ဖုနျးရှိသောအိမျကို ဖုနျးဆကျ၍ ချေါသညျ။ ကားမရှိသော ဖုနျးမရှိသောသူကို သူ့လကျစှဲတျောနှငျ့ ကားလှတျ၍ ချေါသညျ။
အဲ သူ့စိတျကွိုကျလူ ပွညျ့စုံပါက သူကိုယျတိုငျကားမောငျး၍ ထှကျခဲ့ပွီး ခုမနကျစာ ရှေးခယျြသော ဟိုတယျသို့ လာခဲ့ကွသညျ ။ ကိုမွမောငျ၏ ထမငျးစားပှဲတိုငျးမှာ အကောငျးဆုံးေ သာ ဝီစကီကို အရငျမှာသညျ။ အစားကို ကိုယျကွိုကျရာ မှာနှိုငျသညျ ။ ဤသို့ အသီးသီး မမှာလိုပါက ”ဟေ့ တို့ လူ ၆ ယောကျစာ ၊ ဟငျး ၁၀ မြိုး ” စသညျဖွငျ့ အျောဒါ မှာသညျ ။
ထမငျးတဈနပျ ၅၀၀ နှငျ့ ၁၀၀၀ ကွားမှာ ရှိသညျ။ (1989 ငှတေနျဖိုး ) ယငျးသို့ နံကျစာကို ၁၁ နာရီလောကျက စတငျသောကျကွ ၊ စားကွပွီး နာရီပွနျ ၁ ခကျြ လောကျမှာ ပွီးသညျ ။ လူစုခှဲကွသညျ ။ ကိုမွမောငျက လိုကျပို့သငျ့တဲ့လူ ပို့စပွေီး ”ကြှနျတျောတော့ ဟိုတယျပွနျ မှိနျးဦးမယျဗြာ ” ဟု စထရငျးသို့ ပွနျ၏။
သူ ယငျးသို့ မှိနျးပွီး နလေ့ညျ ၃ နာရီလောကျ အိပျယာက ထ၏။ ရခြေိုး၏။အဝတျလဲ၏။ ကဲ လူတဈယောကျ(ကြှနျတျောတို့ မွနျမာလူမြိုးထုံးစံ ) တဈနေ့ ထမငျးနှဈခါ စားရသညျမှာ တဈခါ ကနျြသေး၏။ သူ့စားဖျေါမြားကို မြှျောပွနျ ၊ ချေါပွနျ၏။ ရောကျလာကွ၏။ ညနေ ၅ နာရီ ၊ ၆ နာရီ လောကျမှာ ကားနှငျ့လြှောကျ၍ လညေငျးခံကွပွီး နာမညျကွီးစားသောကျဆိုငျ တဈခုသို့ ရောကျကွပွနျ၏။
ကောငျးတာတှေ သောကျကွစားကွ ပွနျ၏။ ည ၁၁ နာရီလောကျ လူစုခှဲပွီး စထရငျးဟိုတယျသို့ ကိုမွမောငျ ပွနျအိပျ၏။ နံကျ ၈ နာရီလောကျ အိပျယာက နိုးပွနျ၏။ရခြေိုးအဝတျလဲပွနျ၏။ မိတျဆှတှေေ ဆုံကွပွနျ၏ ။ ဘဲအဲယား သို့မဟုတျ မာစီဒီးဘငျ့ဇျကားကွီးနှငျ့ စိတျကွိုကျဟိုတယျရှေးပွီး သှားကွ ၊ သောကျကွ ၊စားကွပွနျ၏။
နာရီပွနျ ၁ ခကျြလောကျ လူစုခှဲကွ ပွနျ၏။ စထရငျးဟိုတယျ၌ နလေ့ယျ ၃ နာရီလောကျ ကိုမွမောငျ မှိနျးရာက ထပွနျ၏။ ရမေိုးခြိုး၏။အဝတျအစားလဲ၏။ သောကျဖျေါ စားဖျေါ မိတျဆှတှေမြှေျော ပွနျချေါပွနျ၏။ စုမိကွပွနျ၏။ သှားပွီး သောကျကွ၊စားကွပွနျ၏။ သနျးခေါငျကြျော ကိုမွမောငျ ဟိုတယျပွနျရောကျပွီး အိပျပွနျ၏။
နောကျတဈနေ့ တဈမိုးသောကျပွနျ၏။ ကိုမွမောငျသညျ သူ၏ နိစ်စဓူဝအတိုငျး တဈနတေ့ာ ပဋိစ်စသမုပ်ပာဒျကို လညျရပွနျ၏။
အို .. စာဖတျသူ ၊
သငျ့စိတျကူးဖွငျ့ သီတငျးတဈပတျလောကျ ၊ သို့မဟုတျ ၁ လလောကျ၊ သို့မဟုတျ သငျ့ စိတျကွိုကျသလောကျ ကိုမွမောငျ နရောမှာ ဝငျပွီး နကွေညျ့စမျးပါ။ဘဝ၏အဓိပ်ပာယျ ဘာရှိတော့ သနညျး ။
( ၁ ) လောကကွီးတှငျ ကောငျးကောငျးစား ၊ကောငျးကောငျးအိပျ ၊ ကောငျးကောငျးနရေုံနှငျ့ မပွီးသေး တကား ။
( ၂ ) သို့သျော ကြှနျတျောတို့သညျ ကောငျးကောငျးစား ၊ ကောငျးကောငျးအိပျ၊ ကောငျးကောငျးနကွေရနျ ကွိုးစားနကွေရသညျ မဟုတျပါလား ။
ဤ အကွောငျး ၂ ရပျ ပေါငျးစပျပွီး စဉျးစားလိုကျသောအခါ ဘဝ၏အဓိပ်ပာယျ ပျေါလာပလေိမျ့မညျ။ စငျစဈ ဘဝကို လနျးဆနျးစိုပွစေရေနျ၊ ဘဝကို မငွီးငှရေ့နျမှာ အလုပျလုပျရနျပငျ ဖွဈခသြေညျ။ ကိုယျလုပျသောအလုပျ၌ အောငျမွငျသညျလညျး ရှိမညျ ၊ မအောငျမွငျသညျလညျး ရှိ၏။
ကနြေပျမှုလညျး ရှိမညျ ။ မကနြေပျမှုလညျး ရှိမညျ။ ဝမျးသာမှုလညျး ရှိမညျ၊ ဝမျးနညျးမှုလညျး ရှိမညျ။ ယငျးသညျပငျ ဘဝ၏အဓိပ်ပာယျနှငျ့ အနှဈသာရ ဖွဈတော့သညျ ။ သို့သျော ကိုမွမောငျ၌ မှေးကတညျးက အစစအရာရာ ပွညျ့စုံနသေဖွငျ့ ဘာမြှလုပျစရာ မလို၊ဘာမြှကွိုးစားစရာ အကွောငျးမရှိ ။
သူသညျ ဘဝ၏ အလုပျလကျမဲ့ ဖွဈနသေညျ။ သူ့အခွအေနကေ လောကီစညျးစိမျဥစ်စာကို လိုတရနသေညျ။ ယငျးသညျပငျ ဘဝ၏မပွညျ့စုံခွငျး ဖွဈသညျကို အလေးအနကျ စဉျးစားတတျသူတို့ နားလညျပမေညျ။ စငျစဈကား ဘဝဟူသညျမှာ ဆငျးရဲခမျြးသာမရှေး ၊တကျကြ နိမျ့မွငျ့ မခွား၊ ဘယျတော့မှပွညျ့စုံသညျ မရှိခြေ။
ယငျးမပွညျ့စုံသညျကို ပွညျ့စုံလိမျ့နိုး ကွိုးစားနရေခွငျး သညျပငျ ဘဝမညျပါ၏။ ကိုမွမောငျ၌ကား ယငျးသို့ ကွိုးစားစရာအကွောငျး မရှိလေ၍ ဘဝ၏ အလုပျလကျမဲ့ဟု ကြှနျတျော ဆိုပါ၏။
xxxxxxxxx The End xxxxxxxxx
သျောတာဆှေ ( သောငျးပွောငျးထှလော ၊ 1989 , June ) crea- H.M.H
မူရငျး ပို့ဈတငျ သူမြားနှငျ့ မူရငျးဓာတျပုံတငျ သူကိုထငျလငျး ၊ ကိုထှနျးဦး တို့ကို Credit ပေးပါ၏ ။
ရန်ကုန် မြို့ Strand ဟိုတယ်မှာ အနေ များတဲ့သူ…‌ငွေကို‌လေ လိုသုံးနိုင်‌ပေမဲ့လ ည်းမေ ပျာ်ရွှင်ခဲ့တဲ့ သူ..သူဌေြး ကီးမိုးကု တ်ဦးမြမောင်
စာရေးဆ ရာသော်တာဆွေက သူငယ်ချင်ြး ဖစ်သူ မိုးကုတ်မြို့သား ကိုမြမောင်အား ငွေကိုလေလို သုံးသူ ဟူ၍ တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ မိုးကုတ်မြို့နေ ဦးကြာညွ န့်ဒေါ်သန်း တို့ ဇနီးမောင်နှံသ ည် မောင်မြမောင်လေး မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်း သိသာစွာ စီးပွားတက်ေ လတော့သ ည်။ကျောက်ကြီးကျောက်ကောင်းများ အောင်ခဲ့ကြ၏။
ကိုမြမောင်က တစ်သိ န်းသုံးလျှင် သူ၏ မိဘများ ကျေက်တွင်းတွင် နှစ်သိန်းတန်ကျောက် အောင်လေ၏။ ကိုမြမောင် တစ်နေ့တစ်သောင်းသာ သုံးစွဲပါက နှစ်သောင်းတ န်ကျောက်သာ အောင်၏။ ကိုမြမောင်က ရန်ကုန်တွင်နေထိုင်ပြီး ငွေကိုလေလို သုံးစွဲလေ၏ ။
စာရေးဆရာေ သ်ာတာဆွေ စသော သူငယ်ချင်းများနှင့် အရက်သောက်၏ ကြက်တိုက်၏ ဟော်တယ် တက်ကြ၏။ သုံးကြ၏ ဖြုန်းကြ၏။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ခြံဧကပေါင်းများစွာ ဝယ်ထား၏။
ဖက်လိပ်စိ န်(ရွှေကို ဖက်ကဲ့သို့ ကတော့ထိုး၍ ထိပ်တွင် တစ်ပွင့်စိန် တပ်ကာ နားဋောင်းအဖြစ် ဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းl နဂါးဒေါ်ဥ ကဲ့သို့ ရှေးက သူဋ္ဌေးမကြီးများသာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်) များစွာရှိလေ၏။
အရည်အသွေးကောင်းသော ပတ္တမြားများ ဆိုလျှင်ကား ပြောဘွယ် မရှိတော့ပါ ။ စာရေးဆရာသော်တာဆွေက ကိုမြမောင် ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဟု မေးရာ “မသိဘူးဗျ”ဟူ၍ အဖြေပေးခဲ့၏။ မိုးကုတ်ကနေ မန္တလေးအထိ တစ်ရာတ န်တွေကို ကားလမ်းအပြည့် ခင်းနိုင်တယ် ဟူ၍ ပြောပြ၏။ ဦးမြမောင် မိုးကုတ်မှမန္တလေးသို့ ကားဖြင့်ဆင်းလာရာ လမ်းတွင် ဂျစ်ကား တစ်စီးက သူ၏ကားကို ကျော်တက်သွား၏။
ထိုအခါ ကိုမြမောင်က ဒရိုင်ဘာအား အဆိုပါဂျစ်ကားကို အမီလိုက်ခိုင်း၏။ မီလာသောအခါ နောက်ကနေ ဝင်တိုက်ခိုင်းလိုက်၏။ ဂျစ်ကားပေါ်က လူများ မျက်ကလူးဆန်ပျာဖြင့် ဆင်းလာသောအခါ
” ခင်ဗျားတို့ကား ဝယ်စဉ်က ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ? ”
“၅၀၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်”
“ရော့ ၅၀၀၀ ” ဟူ၍ အလျော်ပေးလိုက်၏။
ငွေကို လေလိုသုံးသူ ( သို့မဟုတ် ) ဘဝ၏ အလုပ်လက်မဲ့
ရှမ်းစော်ဘွားများ တန်ခိုးအာဏာ ကြီးထွားစဉ်ကာလ တချိန်သောအခါ၌ မိုးမိတ်မြို့နယ် သစ်တောကြိုးဝင်းထဲတွင် မိုးမိတ်စော်ဘွား၏ ဆင်တစ်ကောင်ကိ လူတစ်ေ ယာက်က သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်လိုက်လေ၏။ မကြာမီ ခေါင်းပေါင်းနီနှင့် ရှမ်းပုလိပ်များ ရောက်လာကာ ဆင်သတ်သူကို ဖမ်းဆီးမည်ပြုသော် ထိုလူက
” တောဆင် မဟုတ်ပါဘူး ၊စော်ဘွားရဲ့ စီးတော်ဆင်ပါ ခင်ဗျ ”
” ဟေ့ ငါ့နာမည်က မိုးကုတ်မြမောင် စောခွန်ချို ကို ပြောလိုက် ၊ ငါက သူကိုယ်တိုင် ဝေါနဲ့လာခေါ်မှ လိုက်မယ် ”
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားတွင် `ဆင်သတ်အရပ်ဝေတယ် ဟု ဆိုကြသည် ။ သူတို့ကား ဆင်သတ်၍ ညီအစ်ကိုချင်း ကျီစယ်ကြခြင်း ဖြစ်သည် ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကိုမြမောင်နှင့် စောခွန်ချို သည် မအေညီအစ်မအရင်း ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်သည် ။ စောခွန်ချိုက တကယ်ပဲ ကိုမြမောင်အား ဝေါနှင့်လာကြို ရသည်တဲ့ ။
” ဆရာ့သူငယ်ချင်းက အတော်ဆိုးတဲ့လူဗျာ ” ဟု စောခွန်ချို က ကျွန်တော့်ကို ပြောပါသည် ။
ဟုတ်ကဲ့ ။ ကိုမြမောင်ကား တော်တော်ဆိုးတဲ့ လူပါ ။ ဖဆပလ အစိုးရလက်ထက်ကလည်း ဝန်ကြီးတွေ မာစီဒီးကား စီးရသည်၌ ဝန်ကြီး သခင်သာခင်သည် မိုးကုတ်သားဖြစ်၍ ထိုမာစီဒီးကားနှင့် မိုးကုတ်သို့ ရောက်သွားသည် ရှိသော် ယင်းအချိန်၌ ကိုမြမောင် ကားလည်း မာစီဒီး ဖြစ်နေသောကြောင့်
” ဟာ သခင်သာခင်တောင် ဒီကားမျိုးစီးတယ်ဆိုရင် ငါမစီးတော့ဘူး ”ဟု ဆို၍ သူ့ကားသူ ချောက်ထဲ မောင်းချပစ်လိုက်သည် ဟူသတည်း ။ ကဲ … မယုံလျှင် ပုံပြင်သာ မှတ်ကြပေရော ။အမှန်တော့ ကိုမြမောင်သည် တကယ်ပင် ရှိခဲ့ပါ၏ ။ 1968 ,ဇန္နဝါရီ 18 ရက် နေ့ကမှ အသက် ၄၁ နှစ်နှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြော ပြတ်၍ သေဆုံးသွားပါသည်။သူ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်သည်
”ငွေကို လေလိုသုံးသူ ” ဟူသော ဝတ္ထုတို ရေးခဲ့ပါ၏။ ဝမ်းတွင်းပါ သူဋ္ဌေး စင်စစ် ကိုမြမောင်ကို ဝမ်းတွင်းပါသူဋ္ဌေးဟု ခေါ်ရမည် ဖြစ်၏။ သူ့မိဘများသည် မိုးကုတ်မြို့တွင် ကံအကောင်းဆုံး ၊ ကျောက် အအောင်ဆုံး ဖြစ်၏။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီက သူ့အဖေသည် ပြင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မြို့တွင် ပတ္တမြားဆိုင် သွားဖွင့်ထား၍ မြန်မာပြည်မှ ကျောက်မျက် ရတနာများကို ကမ္ဘာ့ဈေး ထိပ်တန်းမှ ရောင်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ကိုမြမောင်သည် ပဲရစ်မြို့မှာ သွားနေ၍ ပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်ကို အိမ်ဦးကြမ်းပြင် ကူးကာ အမေရိကန် ၊ အင်္ဂလန် မီလျှံနာများ ကဲ့သို့ သုံးဖြုန်းခဲ့သူ ဖြစ်သည် ။ နောက် သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်၍ ပဲရစ်မှာ ပတ္တမြားဆိုင် မရှိတော့သော်လည်း ကိုမြမောင်အဖို့ မြန်မာပြည်မှာ သူ့တသက် ဘယ်လောက်သုံးသုံး၊ ဖြုန်းဖြုန်း မကုန်နှိုင်။
သူ့မိခင်ကလည်း တစ်ဦးတည်းသော သားကြီးအား သုံးပါစေ၊ဖြုန်းပါစေ။ မသုံးမှာ၊မဖြုန်းမှာကိုသာ ပူရသည်။ မြမောင် တစ်သောင်းဖြု န်းလျှင်၊ တစ်သိန်းဝင်ငွေရသည်ဟု ပြောစမှတ် ပြုသတဲ့။ ကဲသည်လူမျိုး ကမ္ဘာတွင် မရှားပါလော ။
သို့သော် ငွေချမ်းသာရုံနှင့် ဘဝမှာ ပြည့်စုံပါ သလော ? ? ?
တနေ့သ၌ ကိုမြမောင်သည် အရက်အမူးလွန်၍ ကျွန်တော့အိမ်တွင် လဲပြီး တရေးအနိုးမှာ ထပ်သောက်ရင်း ဘာတွေများ တွေးမိ၍ ဝမ်းနည်းလေသည် မသိ၊ မျက်ရည်တွေစို့လျှက် ကျွန်တော့အား ပြောဖူးပါသည်။
” ကိုဆွေ …ကျွန်တော့်မှာ ငွေတွေသိပ်ချမ်းသာတော့ သဘောရှိ သုံးဖြုန်းပြီး စိတ်ထင်သလိုနေရ၊ စားရတာ ပျော်တယ်၊ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကျေနပ်နေတယ်များ ထင်သလား။
မထင်နဲ့ ကိုဆွေ၊ ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ ခင်ဗျားဘဝ လဲရရင် လဲလိုက်ချင်တယ် သိရဲ့လား ” ထန်းရည်မူး၍ ကျွဲခိုးပေါ်သည်။ သူ့အသည်းနှလုံးထဲက ပြောသောစကား ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ကျွန်တော် အလေးအနက် စဉ်းစားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် လောကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ဆိုသောခေတ်၊ ငွေရှိ လိုတရသော ခေတ်ကပင် သူနှင့်ကျွန်တော် ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းသင်းခဲ့ပါသည် ။
ကိုမြမောင်သည် သူ၏ဇာတိ မိုးကုတ်မြို့နှင့် သူ့မိခင်နေသော မန္တလေးမြို့မှာထက် မြန်မာပြည်တွင် အကြီးဆုံး၊ သုံးလို့ဖြုန်းလို့ အကောင်းဆုံးသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ အနေများပါသည်။ စထရင်းဟိုတယ်မှာ လပေးနှင့် တည်းပါသည်။
ဟိုတယ်အောက်မှာ သူ့ကားကြီးတစ်စီး ထားပါသည်။ သူလိုသမျှ ခိုင်းရန် လက်စွဲတော် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်၊ လခပေး၍ ထားပါသည်။ နံနက်မိုးသောက်လျှင် သူတို့သည် သူ့ဆီသို့ ရောက်လာရသည်။ ကိုမြမောင်သည် နံက် ၈ နာရီလောက်မှာ အိပ်ယာက ထတတ်ပါသည်။
ဟိုတယ်က ပေးသော ဘရိတ်ဖတ်စ်ခေါ် ကော်ဖီတစ်အိုး ၊ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ် နှစ်ချပ်၊ဝက်မလွတ်ငှက်ပျောသီး ၂ လုံးကို စားလိုက စားပါသည်။ ရေချိုးအဝတ်လဲပါသည်။ရောက် လာ မည့်မိတ်ဆွေများကို မျှော်ပါသည် ။
ဘာလုပ်ရအောင်နည်း။ ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုခုမှာ နံက်စာ စားရအောင်ပါ ။ ဟိုတယ်မှာစားတာ လူများပါမှ ဟင်းလျှာများများနှင့် စားလို့ မြိုင်သည် ၊မြိန်သည် မဟုတ်ပါလား ။ ၁၁ နာရီလောက်ထိအောင် စောင့်သည် ရောက်သင့်သလောက် ရောက်မလာပါက ဖုန်းရှိသောအိမ်ကို ဖုန်းဆက်၍ ခေါ်သည်။ ကားမရှိသော ဖုန်းမရှိသောသူကို သူ့လက်စွဲတော်နှင့် ကားလွှတ်၍ ခေါ်သည်။
အဲ သူ့စိတ်ကြိုက်လူ ပြည့်စုံပါက သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်း၍ ထွက်ခဲ့ပြီး ခုမနက်စာ ရွေးချယ်သော ဟိုတယ်သို့ လာခဲ့ကြသည် ။ ကိုမြမောင်၏ ထမင်းစားပွဲတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးေ သာ ဝီစကီကို အရင်မှာသည်။ အစားကို ကိုယ်ကြိုက်ရာ မှာနှိုင်သည် ။ ဤသို့ အသီးသီး မမှာလိုပါက ”ဟေ့ တို့ လူ ၆ ယောက်စာ ၊ ဟင်း ၁၀ မျိုး ” စသည်ဖြင့် အော်ဒါ မှာသည် ။
ထမင်းတစ်နပ် ၅၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ ကြားမှာ ရှိသည်။ (1989 ငွေတန်ဖိုး ) ယင်းသို့ နံက်စာကို ၁၁ နာရီလောက်က စတင်သောက်ကြ ၊ စားကြပြီး နာရီပြန် ၁ ချက် လောက်မှာ ပြီးသည် ။ လူစုခွဲကြသည် ။ ကိုမြမောင်က လိုက်ပို့သင့်တဲ့လူ ပို့စေပြီး ”ကျွန်တော်တော့ ဟိုတယ်ပြန် မှိန်းဦးမယ်ဗျာ ” ဟု စထရင်းသို့ ပြန်၏။
သူ ယင်းသို့ မှိန်းပြီး နေ့လည် ၃ နာရီလောက် အိပ်ယာက ထ၏။ ရေချိုး၏။အဝတ်လဲ၏။ ကဲ လူတစ်ယောက်(ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးထုံးစံ ) တစ်နေ့ ထမင်းနှစ်ခါ စားရသည်မှာ တစ်ခါ ကျန်သေး၏။ သူ့စားဖေါ်များကို မျှော်ပြန် ၊ ခေါ်ပြန်၏။ ရောက်လာကြ၏။ ညနေ ၅ နာရီ ၊ ၆ နာရီ လောက်မှာ ကားနှင့်လျှောက်၍ လေညင်းခံကြပြီး နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင် တစ်ခုသို့ ရောက်ကြပြန်၏။
ကောင်းတာတွေ သောက်ကြစားကြ ပြန်၏။ ည ၁၁ နာရီလောက် လူစုခွဲပြီး စထရင်းဟိုတယ်သို့ ကိုမြမောင် ပြန်အိပ်၏။ နံက် ၈ နာရီလောက် အိပ်ယာက နိုးပြန်၏။ရေချိုးအဝတ်လဲပြန်၏။ မိတ်ဆွေတွေ ဆုံကြပြန်၏ ။ ဘဲအဲယား သို့မဟုတ် မာစီဒီးဘင့်ဇ်ကားကြီးနှင့် စိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်ရွေးပြီး သွားကြ ၊ သောက်ကြ ၊စားကြပြန်၏။
နာရီပြန် ၁ ချက်လောက် လူစုခွဲကြ ပြန်၏။ စထရင်းဟိုတယ်၌ နေ့လယ် ၃ နာရီလောက် ကိုမြမောင် မှိန်းရာက ထပြန်၏။ ရေမိုးချိုး၏။အဝတ်အစားလဲ၏။ သောက်ဖေါ် စားဖေါ် မိတ်ဆွေတွေမျှော် ပြန်ခေါ်ပြန်၏။ စုမိကြပြန်၏။ သွားပြီး သောက်ကြ၊စားကြပြန်၏။ သန်းခေါင်ကျော် ကိုမြမောင် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး အိပ်ပြန်၏။
နောက်တစ်နေ့ တစ်မိုးသောက်ပြန်၏။ ကိုမြမောင်သည် သူ၏ နိစ္စဓူဝအတိုင်း တစ်နေ့တာ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ကို လည်ရပြန်၏။
အို .. စာဖတ်သူ ၊
သင့်စိတ်ကူးဖြင့် သီတင်းတစ်ပတ်လောက် ၊ သို့မဟုတ် ၁ လလောက်၊ သို့မဟုတ် သင့် စိတ်ကြိုက်သလောက် ကိုမြမောင် နေရာမှာ ဝင်ပြီး နေကြည့်စမ်းပါ။ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ် ဘာရှိတော့ သနည်း ။
( ၁ ) လောကကြီးတွင် ကောင်းကောင်းစား ၊ကောင်းကောင်းအိပ် ၊ ကောင်းကောင်းနေရုံနှင့် မပြီးသေး တကား ။
( ၂ ) သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်းကောင်းစား ၊ ကောင်းကောင်းအိပ်၊ ကောင်းကောင်းနေကြရန် ကြိုးစားနေကြရသည် မဟုတ်ပါလား ။
ဤ အကြောင်း ၂ ရပ် ပေါင်းစပ်ပြီး စဉ်းစားလိုက်သောအခါ ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ် ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။ စင်စစ် ဘဝကို လန်းဆန်းစိုပြေစေရန်၊ ဘဝကို မငြီးငွေ့ရန်မှာ အလုပ်လုပ်ရန်ပင် ဖြစ်ချေသည်။ ကိုယ်လုပ်သောအလုပ်၌ အောင်မြင်သည်လည်း ရှိမည် ၊ မအောင်မြင်သည်လည်း ရှိ၏။
ကျေနပ်မှုလည်း ရှိမည် ။ မကျေနပ်မှုလည်း ရှိမည်။ ဝမ်းသာမှုလည်း ရှိမည်၊ ဝမ်းနည်းမှုလည်း ရှိမည်။ ယင်းသည်ပင် ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် အနှစ်သာရ ဖြစ်တော့သည် ။ သို့သော် ကိုမြမောင်၌ မွေးကတည်းက အစစအရာရာ ပြည့်စုံနေသဖြင့် ဘာမျှလုပ်စရာ မလို၊ဘာမျှကြိုးစားစရာ အကြောင်းမရှိ ။
သူသည် ဘဝ၏ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသည်။ သူ့အခြေအနေက လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာကို လိုတရနေသည်။ ယင်းသည်ပင် ဘဝ၏မပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်ကို အလေးအနက် စဉ်းစားတတ်သူတို့ နားလည်ပေမည်။ စင်စစ်ကား ဘဝဟူသည်မှာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ၊တက်ကျ နိမ့်မြင့် မခြား၊ ဘယ်တော့မှပြည့်စုံသည် မရှိချေ။
ယင်းမပြည့်စုံသည်ကို ပြည့်စုံလိမ့်နိုး ကြိုးစားနေရခြင်း သည်ပင် ဘဝမည်ပါ၏။ ကိုမြမောင်၌ကား ယင်းသို့ ကြိုးစားစရာအကြောင်း မရှိလေ၍ ဘဝ၏ အလုပ်လက်မဲ့ဟု ကျွန်တော် ဆိုပါ၏။
သော်တာဆွေ ( သောင်းပြောင်းထွေလာ ၊ 1989 , June ) crea- H.M.H
မူရင်း ပို့စ်တင် သူများနှင့် မူရင်းဓာတ်ပုံတင် သူကိုထင်လင်း ၊ ကိုထွန်းဦး တို့ကို Credit ပေးပါ၏ ။
ဆှဲ‌ဆောငျမှုရှိတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ အမိုကျစား ကောကျကွောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မဂေရစျေ့ရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး……..
ကိတျလှနျးလှတဲ့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျနဲ့ ဆကျဆီကကြ ဆှဲဆောငျမှုရှိနတေဲ့ မျောဒယျလျ မကျြဝနျးရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုလေး………
ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ ဆကျဆီကကြ ပိုဈ့တှေ ပေးနတေဲ့ မျောဒယျလျ ဝငျးရှရေညျသငျးရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးမြား……..
အမိုကျစား ကောကျကွောငျးနဲ့ အထာကကြ လှပနတေဲ့ မရေတီဇျောရဲ့ အလနျးစား ပုံရျိလေးမြား………
အမိုကျစား ကောကျကွောငျးနဲ့ ဆကျဆီကကြ မိမိုကျနတေဲ့ လုလုအောငျရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး……..